✔ CPU-z v1.04 App✔ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
✔ CPU-z v1.04 App✔
Posted on December 17, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	✔ CPU-z-v1.04 App(android)✔ မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ android ဖုန်းလေးထဲမှ-Cpu/Gpu တွေရဲ့ Setting ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ရာခိုင်နှုန်း limit-
-Cores Number MHz--System တစ်ခုလုံးရဲ့ imformation--Screen Resulotion--Total Ram ပမာဏ--Kernel Version--Internal Storage Limit--Battery လုပ်ဆောင်မှု--Sensors ပါဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များ--MPL/MPU တိုင်းတာမှုစနစ်များ-
အစရှိတဲ့ features များစွာကို ဒီ App လေးကတဆင့် ကြည့်ရှုတိုင်းတာလို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုများအတွက် ရှိထားသင့်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Apk File Size 316KB လေးပဲရှိပြီးAndroid OS Version 2.2 နှင့်အထက်ရှိထားသောဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။လိုအပ်အသုံးပြုလိုသူများ အောက်ကချပေးထားတဲ့ လင့်ခ် များအနက်မှ မိမိနှစ်သက်ရာလင့်ခ် တစ်ခုကနေ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။
★ Mediafire လင့်မှ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်★ ★ Box လင့်ခ်မှ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်★ ★ Dropbox လင့်ခ်မှ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်★ CPU-z DescriptionAndroid version of the popular CPU identification tool for PC/Windows., CPU-Z isafree application that reports information about your device.– SoC (System On Chip) name, architecture, clock speed for each core ;– System information : device brand & model, screen resolution, RAM, storage.;– Battery information : level, status, temperature ;– Sensors.Requirements :– Android 2.2 and above (version 1.03 and +)Permissions :– INTERNET permission is required for the online validation (see notes below for more détails about the validation process)Notes : Online Validation (version 1.04 and +)The validation allows to store the hardware specification of your Android device inadatabase. After the validation, the program opens your validation URL into your current internet browser. If you enter your e-mail address (optional), an e-mail with your validation link will be sent to you asareminder.Settings screen and debug (version 1.03 and +)If CPU-Z closes abnormally (in case of bug), the settings screen will appear at the next run. You can use that screen to remove the main detection features of the application, and make it run. အဆင်ပြေ ပါစေ ကိုဇော်သွင်(နည်းပညာ)
← ✔ ဆရာလွတ်အဂ်လိပ်စာရေးနည်းစာအုပ်✔	✔ Laptop မှာ Wifi သုံးလို့မရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်း စာအုပ်✔ (Credit "pthaw") →